Uygun na Peradze nleta Erzurum Railway Station na Museum - RayHaber
HomeTurkeyEastern Anatolia Region25 ErzurumUygun na nleta Peradze na Erzurum Railway Station na ebe ngosi nka
30 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, ụgbọ okporo ígwè, Eastern Anatolia Region, Foto, General, oru, Isi akụkọ, Turkey, TCDD 0
nleta nke ebe kwesịrị ekwesị na peradzine
TCDD General Director Ali Ihsan kwesịrị ekwesị, Turkey-ijeoma ememe nke mbụ mbupụ ụgbọ okporo ígwè na Georgia ga-arụ ọrụ na ya mere Railways na Georgia na mba anyị General Manager David Erzurum 23 July 2019 Tuesday na Peradz gara Station na Museum.
Onye isi njikwa Uygun, usoro ụlọ akụ abụghị oge zuru ezu na ọdụ ndị ọrụ TCDD na-arụ ọrụ n'ime ụgbọ ahụ zigara akpa akpa akpụkpọ anụ Peradze'ye akpa.
Onye isi njikwa TCDD Ali İhsan Uygun na Georgian Railways General Manager David Peradze bịanyere aka n'akwụkwọ ncheta ahụ na zlọ Ọrụ Erzurum.
Taa na History: 20 June 2003 bụ nke mbụ nke Erzurum Express nke na-arụ ọrụ n'ahịrị Ankara-Erzurum ... 20 / 06 / 2012 20 June 2003 Ụzọ nke Erzurum Express, nke na-agba na Ankara-Erzurum, agbatịwo Kars.
Turkey mbụ ụgbọ okporo ígwè ngosi nka na Sirkeci Train Station 31 / 05 / 2016 Turkey mbụ ụgbọ okporo ígwè ngosi nka na Sirkeci Station: Sirkeci Train Station na Istanbul nke mere ihe akụkọ ụlọ, na-mba Railway Museum. 11 afọ gara aga meghere Turkey mbụ ụgbọ okporo ígwè ngosi nka, na ọ na-nọ karịa 400 akụkụ. Ụlọ ihe ngosi nka nabatara ndị ọbịa ya na ihe ndị dị na Orient Express. Mmalite nke Rumeli Railways bụ njedebe nke okporo ụzọ na-abịa site na Europe. Sirkeci Station, isiokwu nke uri nke akwụkwọ, adreesị nke nkewa na nchịkọta. Ọ bụ na Railroad Museum, nke dị n'akụkọ ihe mere eme nke ọdụ ụgbọ oloko ahụ. N'ebe ngosi ihe ngosi nka nke ihe ngosi ihe omuma a di n'aka Orient Express ama ama ma jiri n'oge njem biara ndi ozo n'ebe a. Ụlọ ihe ngosi nka, nke e meghere na 2005, bụ ụlọ ọrụ ngosi okporo ígwè mbụ na Istanbul.
Ezinụlọ Museum nke Erzurum meghere ndị ọbịa 09 / 01 / 2014 Erzurum Station Museum e meghere ka ọbịa: Turkey si 2. E nwere ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme 320, ngwá ọrụ na akụrụngwa na Erzurum Railway Museum, nke bụ ụlọ ngosi ihe ụgbọ okporo ígwè. Yunus Yeşilyurt, TCDD Erzurum Operations Manager kwuru na e nwere ihe ndị 150 na-eme kwa afọ na Gar Museum na ụmụ amaala chọrọ ịga leta ha n'efu. Eeilleurt, "E guzobere Museum Garzzum Museum na 2000 afọ, ọrụ 150 kwa afọ. E guzobewo ihe ngosi nka n'okpuru Uzo akwukwo ihe omuma nke 320, ngwa oru na akụrụngwa di. Na ihe ngosi nka, foto ndi ozo site na ememe a haziri maka uzo mbido ụgbọ okporo ígwè na Erzurum na 1939, nnukwu nnukwu mgbịrịgba na-akpọ ndị njem iji banye n'ụgbọ okporo ígwè, ngwá na oriọna ọkụ nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-eji oge,
President Gök'ten TCDD na-eleta akụkọ ihe mere eme Eğirdir Station 29 / 05 / 2019 Isparta na-ịtụ Mayor Veli eluigwe Republic of Turkey State Railways (TCDD) Director xnumx.bölg Regional Director nwere okwu banyere Adam na Sharp ógbè. Historical Egirdir Station and Historical Buildings in the Field Survey and Restoration Projects Ị nweta ozi banyere ọkwa ọhụrụ nke President Gök, nke obodo Munirdir kwụrụ ụgwọ nyere akụkọ gbasara nhazi ala na ogige ntụrụndụ. Ọ gbanwere echiche banyere ọrụ a ga-arụ. Mpaghara ikpeazụ nke nyocha Egirdir - Bozanönü - Isparta Railway Line, Etude, onye natara ozi gbasara ọrụ ahụ na-arụ ọrụ President Veli Gök, Director Regional nke TCDD 7 Müdür
Tcdd Erzurum Station Manager Başar nyere ama gbasara ụgbọ elu dị n'etiti Erzurum na Ankara 30 / 03 / 2012 Ahịa Basar, Erzurum-Ankara na-agba ọsọ ụgbọ oloko arụ ọrụ, akụkọ a ga-emezu, ọ sịrị. Onye dị mma, onye na-ede akwụkwọ AA, kwuru na nkwupụta, 2012 ga-abanye ọrụ dị mkpa n'oge okpomọkụ. Başar kwuru na mmalite nke akụkọ ihe mere eme ga-ahụ maka Erzurum na mmalite nke njem ụgbọ elu dị elu. Ụgbọ okporo ígwè na ọsọ ọsọ dị ka mpaghara ụgbọ okporo ígwè ngwa ngwa ga-eme ka ndị mmadụ nọrọ jụụ, dị mma
Taa na History: 20 June 2003 Erzurum Express na akara Ankara-Erzurum 20 / 06 / 2015 Akụkọ Taa Taa 20 June 2003 Ụzọ nke Erzurum Express, nke na-arụ ọrụ na Ankara-Erzurum, ka esitela na Kars.
TRT Museum Wagon Taa Na-abịa Site Ankara Station 31 / 01 / 2014 Taa, TRT Museum n'ụgbọala Road si Ankara Train Station amama: na General Directorate of Turkey Radio na Television Corporation 50. "TRT Museum Wagon hazırlanan kwadebere maka iji na Turkey na mba ndị ọzọ dị ka 'TRT Publishing and History Museum na-esite n'ememe nke ememe afọ; Minista Transport, Maritime Affairs na Communications Lütfi Elvan, Director General TRT İbrahim Şahin, Director General TCDD Süleyman Karaman 31 January 2014 Na Fraịdee na 17.15, e zigara ya Ankara Gar n'oge ememe. Site na ihe kacha ochie n'ime igwe na akụkọ mgbasa ozi na ihe ndị a na-emepụta taa, site na ihe ndị mere eme na igwe okwu nke Atatürk, site na redio ndị na-eme redio na akụ ndị a na-eme na fim, TRT birçok
TRT Museum Wagon na-aga ọdụ ụgbọ okporo ígwè Alsancak 06 / 02 / 2014 TRT Museum Wagon ruru Alsancak Train Station: E gosipụtara ihe dịgasị iche iche nke ihe dị n'ime ụgbọala nke mbipụta na akụkọ ihe mere eme nke akụkọ ihe mere eme, site na obere microphones n'akụkọ ihe mere eme gaa n'uwe akụkọ ihe mere eme. Turkey Radio na Television Corporation (TRT) oruru nke 50. na-eme ka afọ ahụ nwee ọrụ dị iche iche. N'ime ihe omume ndị a, "TRT Publishing and History Museum Wagon" na-apụ site na Ankara ruru Alsancak Train Station. N'ụgbọala nakwa dị ka Izmir na Turkey ga-izute na ụmụ amaala na ọtụtụ isi ihe. Ndị ọbịa nke ụgbọala ahụ ga-enwe ike ịhụ ihe ndị kasị ochie n'ime akụkọ ihe mere eme nke mgbasa ozi, site na ụlọ ọrụ ihe nkiri nke taa, na igwe okwu nke Atatürk ji eji ejiji. TRT Museum Wagon; 7 ga-anọ na Alsancak ruo mgbe February.
One of Turkey, Europe si Nke Open Air Locomotive Museum na-ejide elu xnumx'y 26 / 12 / 2015 One of Turkey, Europe si Nke xnumx'y na Open Air Locomotive Museum nke nketa: Turkey nanị dere otu n'ime Europe si eduga ngosi ihe mgbe ochie, Izmir si Selçuk district na-emi odude n'ime obodo nke summerhouse. Turkey nanị dere otu n'ime Europe si eduga ngosi ihe mgbe ochie, Izmir si Selçuk district na-emi odude n'ime obodo nke summerhouse. Ihe ngosi nka na-emeghe n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè İzmir-Aydın, nke e wuchara ya na 1866, nwere ihe omuma akụkọ ihe mere eme 1866. Ụgbọ okporo ígwè, onye akụkọ ya laghachiri ịchọ British maka owu n'ihi agha obodo Amerịka, dị ugbu a maka ụlọ ngosi nka. Camlik Open Air Locomotive Museum, German, British, French, American, mepụtara n'etiti 36 na 1887 ...
Turkey si lekwasịrị ọhụrụ High Speed ​​Railway Transportation Freight Transportation E Nwere 29 / 07 / 2012 The ụlọ ọrụ na-elekọta iwu na-emetụta ndị na-eri ruru 92 percent na-ahọrọ ụzọ iga, Turkey anaghị agasi na mba ndị mepere emepe maka dị ọnụ ala karịa ibu iga. Dị ka ụfọdụ ndị ọkachamara si kwuo, ụzọ ọpụpụ bụ iji gbanwee usoro ụgbọ oloko dị elu nke kwesịrị ekwesị maka ibufe ibu. Turkey na onwe oru na ụfọdụ nke ikpe, ma e wezụga dị a n'ozuzu 1 mgbe unit price nke ngwongwo ebu oké osimiri, nke a na ọnụ ọgụgụ 4 ígwè ụzọ, ụzọ atụgharịa black xnumx'y. N'ime obodo dum, 7, ụgbọ okporo ígwè site na 3 na njem ụgbọ ala site na 5, na-eme njem ụgbọ mmiri. Dị ka a ọnụ ọgụgụ, Turkey, ọnụ ala ...
Ogige okporo ụzọ Erzurum
Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Erzurum na ebe ngosi nka
Museumlọ ihe ngosi nka nke Erzurum
Taa na History: 20 June 2003 bụ nke mbụ nke Erzurum Express nke na-arụ ọrụ n'ahịrị Ankara-Erzurum ...
Turkey mbụ ụgbọ okporo ígwè ngosi nka na Sirkeci Train Station
Ezinụlọ Museum nke Erzurum meghere ndị ọbịa
President Gök'ten TCDD na-eleta akụkọ ihe mere eme Eğirdir Station
Tcdd Erzurum Station Manager Başar nyere ama gbasara ụgbọ elu dị n'etiti Erzurum na Ankara
Taa na History: 20 June 2003 Erzurum Express na akara Ankara-Erzurum
TRT Museum Wagon Taa Na-abịa Site Ankara Station
TRT Museum Wagon na-aga ọdụ ụgbọ okporo ígwè Alsancak
One of Turkey, Europe si Nke Open Air Locomotive Museum na-ejide elu xnumx'y
Turkey si lekwasịrị ọhụrụ High Speed ​​Railway Transportation Freight Transportation E Nwere